Ramatoa Telo Mahery Fo Mandefa Fanentanana Mba Hamporisihina Ny Fitaterana Ireo Tranga Momba Ny Herisetra Ara-nofo Ao Meksika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Mey 2016 16:56 GMT
Mpianatra ao amin'ny ambaratonga ambony mipetraka ao amin'ny toeram-ponenan'ny mpianatra ao Acatlán, ao amin'ny Anjerimanontolo Nasionaly Mizakatena ao Meksika i Gabriela Nava. Niharan'ny herisetra ara-nofo teo akaikin'ny toeram-ponenan'ny mpianatry ny anjerimanontolo i Gabriela raha iny nisy lehilahy iray naka sary ny tao anaty zipony, tamin'ny fakantsary tamin'ny finday. Fantatra taty aoriana kely fa mpiasa iray ao amin'ny anjerimanontolo io olona io.
Nandritra izany fotoana izany, olona iray no nanafika an'i Andrea Noel – efa fantatra ankehitriny – olona izay nanainga ny zipony teny an'arabe ary nisintona ny silipony hiborotsaka, taovam-pananahany hihanjahanja nandritry ny fotoana fohy.
Tamin'ny Martsa 2016, nanokana santionany kely ny Global Voices mikasika ny herisetra mahamenatra natao tamin'ireo vehivavy tao Meksika sy ny paikady mirindran'ny governemanta mikasika ny fanomezan-danja ny asam-birao ary famoronana ireo “ fanairana ny miralenta” mba hisehoana hoe miatrika ilay olana sy manaraka ny andraikiny mifanaraka amin'ny lalàna iraisam-pirenena momba ilay fotokevitra.
Nissho masoandro ilay lahatsary tamin'ny fotoana izay nitodihan'ny sain'ny olona hifantoka lalina tamin'ireo tranganà heloka bevava ara-nofo atao amin'ireo vehivavy taorian'ny fandrakofana goavana ny tranga nanjo an'i Andrea Noel sy ilay tranga tsy takona nafenina “Los Porkys“, izay niampangana tanora efatra avy amin'ny sangany ara-tsosialy tao amin'ny fanjakan'i Veracruz (ao atsinanan'i Meksika) ho nanolana zaza tsy ampy taona.
Mahatonga ireo fanentanana toy ny “Aza mangina” ho tena ilaina ny fitomboana mahatahotry ny isan'ireo heloka bevava marobe mikasika ny fanafihana ara-nofo ao Meksika. Araka ny tambajotra Actitud Fem:
Noho izany, mfanindran-dàlana amin'ilay fanentanana “Aza mangina”, niantso andro iray hanaovana fihetsiketsehana tamin'ny Alahady 14 Avril 2016 ireo vondrona mahery fo nanohana ireo vehivavy, izay mikendry ihany koa mba hanosehana ny teny filamatra hoe: “raha voakitika ny iray aminay, izahay rehetra no mamaly”, araka ny fampahafantarana tao amin'ny media nomerika Tercera Via. Nitatitra momba io tranga io ihany koa i Sara Lovera ho an'ny tambajotra fanaovana bilaogy tsy miakina, Homozapping fa: